Iindaba zeNtengiso yeStock | Ezezimali (Ekhasi 2)
Kukulungele ukuba uchonge awona maxabiso ayingozi kumvuzo oguqukayo ukuze ungavuli izikhundla kuzo kwaye ngale ndlela uphephe ukubonakaliswa.
Ungayigcina njani imali kwintengiso yesitokhwe?
Icebo elincinci onokuthi ulisebenzise ngoku ukugcina imali kwiimali zakho zobuqu kukulinda ixesha elide ukuthengisa izabelo.
Ngawaphi amaxesha onyaka anokuthengwa kwimarike yemasheya?
Ukukhetha ixesha lonyaka lokutyala imali kwimarike yemasheya yenye yezinto ekufuneka sizibekele ukwenza imisebenzi enenzuzo kwimarike yemasheya ngesiqinisekiso esikhulu sempumelelo.
Inditex ukuthengisa kuyakhula: lixesha lokuthenga?
Elinye lamandla e-Inditex kukuba iyacetyiswa kakhulu ngabahlalutyi bezemali kwipotfoliyo yotyalo-mali yonyaka olandelayo.
I-Eurona kwimeko enzima
Ukuba kukho ixabiso elibadanileyo bonke abatyali mali abancinci nabaphakathi, ibingeyonto ingeyiyo i-Eurona kwaye ngoku ithengisa nge-0,30 euro.
Usebenza njani ebusweni bokumelana?
Ukuxhathisa kwimarike yemasheya lelinye lamaqhekeza aphambili kuhlalutyo lobuchwephesha kwaye ukuba uyazi ukuba ungasebenza njani unokufezekisa impumelelo emininzi ekusebenzeni.
Iindices ezimbini ezikhethekileyo kwimarike yestokhwe yaseSpain: Ibex 35 Izabelo kunye neIbex 35 Inverso
Eyesibini yee-indices zesizwe, i-Ibex 35 Inverso, inoxanduva lokuphinda-phinda intshukumo yemihla ngemihla ye-Ibex 35, kodwa kwelinye icala.
Ukuqhekeka kukaThomas Cook kubetha ukhenketho lwaseSpain kwimarike yemasheya
Iindawo ezichaphazeleka kakhulu kukungabinamali kukaThomas Cook kwaye ethe yabetha ukhenketho lwaseSpain kwimarike yemasheya kanye zezi ziqithi: iBalearic Islands kunye neCanary Islands.
Sisiphi isicwangciso esiliqili sokuphuhlisa kunye neebhanki?
Ukuba kukho icandelo elibuthathaka kakhulu okwangoku, alikho elinye ngaphandle kwebhanki. Kukumanqanaba asezantsi kule minyaka idlulileyo kwaye kunye neerhafu zanele ukukhumbula ukuba ngokubhekisele kwixabiso lecandelo lebhanki kwisalathiso sesitokhwe esikhethiweyo, i-Ibex 35, icandelo elihle labameli bayo lixabiso eliphakathi ngokunxulumene nesicatshulwa kwiminyaka embalwa edlulileyo
Awona macandelo afanelekileyo okutyala imali emva kokubuya ekhefini
Ibhanki yotyalo-mali yaseMelika uMorgan Stanley uhlaziye uqikelelo lweebhanki zaseSpain emva kweBhanki eNkulu yaseYurophu (i-ECB) Alithandabuzeki elokuba ukuba iimakethi zesitokhwe zinyuka kwinxalenye yokugqibela yonyaka, elinye lamacandelo emarike yemasheya eliza kutsala ii-indices eziphambili kukwakha
Amaxabiso ama-5 aphucule inkangeleko yabo kwezobuchwephesha kwiintsuku ezidlulileyo
Iinkampani zeinshurensi yenye yexabiso le-Ibex 35 elinokuthatha indiza kancinci kancinci ngenxa yokuphucuka kwayo kubuchwephesha.
I-Acerinox edityaniswe nemijikelezo yezoqoqosho
Elinye lamaxabiso esalathiso se-equity equity, i-Ibex 35, eye yehla kakhulu kwiminyaka yakutshanje yinkampani yentsimbi iAcerinox.
Olunye utshintshiselwano lokulungisa kunye nokusaba ukungazinzi kwezopolitiko eSpain
Abatyalomali lelinye lawona macandelo axhalabisayo kukungazinzi kwezopolitiko eSpain, apho baya kuvota nge-10 kaNovemba.
Amasheya ama-6 anesabelo esinenzuzo kakhulu ngaphambi kwento enokwenzeka
Isahlulo sinokukhetha ukubandakanywa kwiipotfoliyo zabatyali mali ngexesha lokungazinzi.
Uhlaselo lwezinto zokucoca ucoceko lwase-Saudi Arabia luya kuchaphazela njani iimarike?
Emva kohlaselo eSaudi Arabia, abahlalutyi bakholelwa ukuba ixabiso le-crude linokuya kumqobo we-100 yeedola.
Iimpawu zee-cap ezinkulu: izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga
Kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, kukho amanani achazwe ngokuthe ngqo athathelwa ingqalelo njengaphezulu.Kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, kukho amaxabiso athile achazwe njenge ikepusi enkulu
Iindlela ezili-7 zokusebenza ngamaxabiso aphantsi
Ayothusi into yokuba kusazofuneka siphile ngenzala ephantsi kakhulu, nkqu nembuyekezo embi.
Ixesha elizayo lemali yokuthengisa
Enye yeenzuzo eziveliswe likamva lemali kukuba uneemali ezininzi apho unokuqhuba khona: Iidola zaseMelika.
Ngaba imeko yonyulo olutsha inokuyichaphazela njani imarike yemasheya?
Ukuba kukho icandelo kwicandelo lezemali elinokwenzakaliswa lunyulo olutsha, ngumbane, njengoko ulicandelo elilawulwayo.
Iimpahla ze-5 zezemali ezinobungozi obuninzi, kodwa zinokubakho ukuphinda ziphonononge
Ukuba kukho iasethi yezemali enxulunyaniswe nemisebenzi eyingozi, ngokungathandabuzekiyo nayiphi na imali ebonakalayo ngenxa yokungazinzi okuphezulu okubonisayo.
Amanqanaba okuvula izikhundla kwimarike yemasheya
Unenkqubo apho ungangena khona kwiimarike ze-equity kunye neziqinisekiso ezingaphezulu zempumelelo kumanqanaba athile.
Iingcebiso ezisi-7 zokuphucula imbuyekezo kutyalo-mali
Isixa sokugqibela salo nyaka kufuneka sisebenze kubatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuze baphuhlise ezona zicwangciso zilungileyo zotyalo-mali ukuze babe nazo Isixa sokugqibela sonyaka kufuneka sisebenze kubatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuphuhlisa njengeengcebiso kwizicwangciso zotyalo-mali ezona njongo zazo ziphambili ikukuphucula ilifa lethu lobuqu okanye losapho.
Iingcebiso ezi-6 zokutyala imali kwimarike yemasheya ngempumelelo
Enye yeengcebiso ezilungileyo zokutyala imali kwiimarike ze-equity iya kuba kukuxabisa ukufunda okuthile ekusebenzeni.
I-Ferrovial yeyona nkampani ibalaseleyo yokwakha
Izitokhwe zeFerrovial ngokucacileyo zisebenza okomzuzwana nangalo mzuzu, ngaphandle kwempawu zobuthathaka ukuvala izikhundla.
Izicwangciso zotyalo mali kwisiqingatha sokugqibela sonyaka
Elinye lamaqhinga onokulisebenzisa kule nxalenye yokugqibela yonyaka kukukhetha izitokhwe ezihambisa izabelo eziphezulu
Bekusoloko kusithiwa olona tshaba luphambili lweemarike zezabelo kukungathandabuzeki okwenziwa kuqoqosho, ezopolitiko kunye nehlabathi Kuhlala kusithiwa olona tshaba luphambili lweemarike zezabelo kukungathandabuzeki okwenziwa kuqoqosho, kwezopolitiko kunye ishishini
Uhlengahlengiso kumaxabiso eebhanki ezidwelisiweyo yinto eqhelekileyo kule mihla kwaye ikwelona nqanaba lisezantsi kule minyaka idlulileyo.
Alithandabuzeki elokuba ukhuseleko olucingelwayo lolunye umthombo weenzuzo ezinkulu okanye inzuzo yexabiso eliphezulu.
Ukuhamba komoya kuyanda eSpain: kulungile kumaxabiso abakhenkethi
Akukho melo linamandla kakhulu kwinxalenye yexabiso labakhenkethi elifanelekileyo kuqoqosho lwesizwe kwaye elinokunika inzuzo enkulu.
Athini amaxabiso kwimarike yaseSpain echaphazelekayo yiBrexit?
Kuyaziwa ukuba iBrexit ligama eliqulunqelwe ukubhekisa ekuphumeni kwe-United Kingdom kwi-European Union. Kodwa yintoni ngamanye amaxesha engaziwayo Kuyaziwa ukuba iBrexit ligama eliqulunqelwe ukubhekisa ekumkeni kwe-United Kingdom kwi-European Union.
Icala elilungileyo lale ntsebenzo yiTelefonica kwiimarike zesitokhwe kukuba isivuno sayo sezahlulo ngoku siphezulu kunaphambi kwehlobo.
Ngokomgaqo, inqaku lembambano ligxile kumanqanaba aphakathi kwe-8.700 kunye ne-8.900 yamanqaku, kwinqanaba leethontsi zokugqibela.
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekubonakaliseni ukuba izinga lokuhla kwamandla emali lingaphakathi kukucaciswa kwesixa semali yomhlala-phantsi.
Ixabiso ekujoliswe kulo lesabelo lixabiso athi umhlalutyi woqikelelo lweemarike zezemali anokuthi okanye angahlangatyezwa.
9 Iindlela zokungangeni ematyaleni kwimarike yemasheya
Owona mngcipheko mkhulu obandakanyeka kutyalo-mali kwiimarike zengeniso kukuba unokuba kwimeko yamatyala. Oko kukuthi, owona mngcipheko mkhulu ubandakanyeka kutyalo-mali kwiimarike zengeniso kukuba ubekwimeko yetyala kwaye ngenxa yoko kukho izitshixo zokuyiphepha
Embindini wexesha lasehlotyeni, iSpain iba yindawo yokufikela abantu abangenakubalwa abakhetha iindawo kunye nezixeko zabo ukuba bathathe uhambo lwabo lwasehlotyeni.Phakathi kwexesha lasehlotyeni, iSpain iba yindawo yokufikela abantu abaninzi abakhetha iindawo zabo kunye nezixeko abazenzayo. iiholide zabo ngaphakathi kohambo lwabakhenkethi okhoyo, zombini ngokubhekisele kwicandelo lokukhupha nakwamanye amazwe
Elinye lawona macandelo asebenze kakubi kulo nyaka kwiimarike ze-equity ngaphandle kwamathandabuzo licandelo leebhanki. Izisa elinye lamacandelo ngokusebenza gwenxa kulo nyaka kwiimarike zezabelo ngaphandle kwamathandabuzo licandelo leebhanki.
Enye yezinto ezintle ze-IAG kukuba isasaza phakathi kwabanini zabelo esinye sezona sabelo sikhulu kwizabelo zamashishini esizwe.
Ukoyiswa konyulo kurhulumente wangoku eArgentina kukhokelele ekuweni kwemarike yemasheya yaseMelika ngamandla amakhulu.
Ithuba lonyulo eSpain nase-Italiya olwenzekileyo kokuwa lukhokelele kwisalathiso esikhethiweyo sengeniso yaseSpain, i-Ibex 35, ukuya kwinqanaba lonyaka.
Kukho idinomineyitha phakathi kweSantander kunye neBBVA kwaye yiyo loo nto kuzo zombini iimeko bahlawula izabelo kubanini zabelo, ngenzuzo ejikeleze i-5%.
I-CPI ephezulu inokudala ukungavisisani okufanelekileyo kwilizwe okanye kwindawo yezoqoqosho, kangangokuba enye yezona ntengiso zichaphazelekayo zezemali.
Ibex 35 iqala i-downtrend ngokuwela ngaphantsi kwamanqaku angama-9.000
Isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, ivaliwe emva kweenyanga ezininzi ngaphantsi kwenqanaba elibalulekileyo lamanqaku ayi-9.000.
Ukuqhuma okupheleleyo kwezabelo zaseSpain eziza kuthi ziphume kwisiphithiphithi esitsha. Emva kwesalathiso esikhethiweyo sokukhetha iVolantazo kwii-equity zaseSpain eziza kuthi ziphume kwi-downtrend entsha. Emva kwesalathiso sikazwelonke esikhethiweyo, i-Ibex 35, sele iza kubekwa ngaphantsi kwamanqaku angama-9.000
Alithandabuzeki elokuba icandelo lesibini lonyaka liya kuba nzima kakhulu ukujongana neemarike zezabelo. Apho kukho izinto ezininzi ezingathandabuzekiyo ukuba icandelo lesibini lonyaka liya kuba nzima kakhulu ukujongana neemarike zezabelo. Apho kukho izinto ezininzi ezinokuthi zinciphise ibhalansi kwicala elinye okanye kwelinye
I-ECommerce lelinye lamacandelo asakhasayo kwii-equities e-United States, enendlela ecacileyo yokunyuka.
Akunakulityalwa ukuba kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, eyona nto yayijolise kuyo yiNokia Gamesa yayiyi-18 okanye ii-euro ezingama-20 ngesabelo ngasinye.
Kwimeko yentengiso engentle kakhulu, inyani yokuba ubunkokeli obuphezulu be-BBVA ityholwa ngolwaphulo-mthetho inokuba neziphumo ezixhalabisayo.
Izabelo ezi-3 ezinokhetho lokufowuna kwi-Ibex 35
Ibex 35 yenye yee-indices zesitokhwe ngoku ezibuthathaka kwii-equities zaseYurophu. Kodwa nangona kunjalo, kukho amaxabiso amathathu Ibex 35 yenye yee-indices zesitokhwe ezibuthathaka ngoku kwii-equity zaseYurophu, kodwa nangona kunjalo, kukho amaxabiso amathathu abonisa umba wobuchwephesha ongenakulinganiswa
Oko kubizwa ngokuba yi-intraday yimisebenzi ephethe umngcipheko omkhulu kunenye ngenxa yokuba nayiphi na impazamo oyenzayo inokubiza kakhulu,
I-Naturgy yenye yexabiso le-Ibex 35 ebonakalise ithoni ye-bearish ethe kratya kwinyanga kaJulayi
Ukuwa kwe-Ibex 35 kwakuseRoma, apho ipremiyamu yomngcipheko wase-Italiyane yenyuka yaya kutsho kumanqaku ayi-193 kunye neebhanki lelinye lawona macandelo mabi kwezorhwebo.
Ewe imeko yezoqoqosho olukhulu kwimarike yemasheya iyakuthatha isigqibo ukuze kwiinyanga ezizayo sikwazi ukwenza ipotifoliyo enobulungisa. ipotfoliyo efanelekileyo yotyalo-mali kunye nokulingana, ngenjongo yokwenza iimpazamo ezimbalwa kangangoko kunokwenzeka
Iindleko ezichaphazelekayo kwintengiselwano kwimarike yemasheya
Alithandabuzeki elokuba yonke intengiselwano kwintengiso yemasheya ibandakanya iindleko ezizinzileyo, njengokusebenza kwebhanki oko kunjalo. Kuba enyanisweni, xa kufikwa kubungakanani kufuneka ungalibali ukuba iibhanki ziya kukuhlawulisa kabini iikomishini, ngexesha lokuthenga nokuthengisa izabelo
Amaxesha okuthengisa izabelo ngendlela efanelekileyo
Ixesha lokuthengiswa kwezabelo lelinye lezona zinto zibalulekileyo kwimisebenzi yabatyali mali kuba iziphumo zinqunyelwe.
I-Cellnex phakathi kweentandokazi zeebhanki zotyalo-mali
Enye yezinto ezimangalisayo ezothusayo kulo nyaka ngokubhekisele kukhuseleko olwenza isalathiso se-equity index yi-Telecom Cellnex.
Ngokuqiniseka okukhulu ukuba ngamanye amaxesha uyakube uve ngeemarike zekamva kwaye usenokuhendeka ukuba uzenze.Iimarike zekamva ngokuyintloko luphuhliso lweekhontrakthi zokuthenga okanye ukuthengisa izinto ezithile kumhla ozayo.
Utshintsho lwendlela yombane: baya kuthengisa
Okomzuzu ongalindelekanga kubekho utshintsho kwinkampani zombane. Ukuya kuthenga ukuya kuthengisa kwiiveki ezimbalwa.
I-IGBM, njengoko abatyali mali baseSpain beya kwazi kakuhle, yiGeneral Index yeMadrid Stock Exchange kwaye ibonelela ngothotho lwamaxabiso esitokhwe kwiimeko ezininzi IGBM, njengoko abatyali mali baseSpain besazi, yiGeneral Index yeMadrid Stock Exchange kwaye ibonelela ngothotho lwamaxabiso entengiso yeStock amaxesha amaninzi engaziwa ngabasebenzisi
Ukufuna imbuyekezo ephezulu, kuyakufuneka ukubhenela kwezinye iindlela zotyalo-mali ezintsha. Umzekelo, ngekhontrakthi yokufuna imbuyekezo ephezulu, kuyakufuneka ukubhenela kwezinye iindlela zotyalo-mali ezintsha, ezinje ngokufumana ikhontrakthi kwiidipozithi zebhanki ezihambayo okanye ukutyala igolide ukukhuthaza ukonga.
Esinye sezona sitokhwe sisebenzayo kwiimarike ze-equity okwangoku ngaphandle kwamathandabuzo ngumgaqo womoya we-IAG.
Isiganeko esitsha esichaphazelekayo esichaphazela ukulingana kweemarike zemali yimfazwe enokwenzeka phakathi kwe-US ne-Iran. Ngapha koko sele zininzi Iziganeko zamva nje ezichaphazela iindaba ezichaphazela urhwebo lwezemali yimfazwe enokubakho phakathi kwe-US ne-Iran.
Imibuzo, eyayivela kuma-90% abantu, yayijolise kwelona xabiso lincinci lodweliso nakwezokubizwa kwe-Abertis. IOfisi IOfisi yoMkhuseli woTyalomali kwiMadrid Stock Exchange iphathe izicelo ezingama-13.250 zolwazi ngo-2018, i-2,3% ngaphezulu kwezicelo eziphendulwe kunyaka ophelileyo, apho i-90% yemibuzo yenziwa ngabatyali mali babucala.
Kunqabile ukuba iinkampani zamandla ziziphathe ngale ndlela ngequbuliso kwiimarike zokulingana zasekhaya.
Utyalomali: Iiklabhu zebhola ekhatywayo zifumene phantse i-19% ngaphezulu
Eyona ndlela yoqobo yokwenza ulondolozo olunenzuzo kukudlala ibhola ekhatywayo kwaye ithunyelwe ngokukodwa kwibhola ekhatywayo ye-STOXX. Apho akuyo Eyona ndlela yoqobo yokwenza ukonga ngenzuzo kukudlala ibhola ekhatywayo kwaye ithunyelwe ngokukodwa kwibhola ekhatywayo ye-STOXX, apho ezinye zeeklabhu zebhola ekhatywayo ezibaluleke kakhulu kwilizwekazi elidala zidityanisiwe.
Iimpazamo ezi-6 ekufuneka uzenzile engxoweni
Njengoko bonke abatyali mali besazi, naziphi na iimpazamo kwisicwangciso sakho sotyalo-mali zinokucaphukisa izicwangciso zakho zokwenza ulondolozo lwakho lube nenzuzo. Ke ngoko, njengoko bonke abatyali mali besazi, naziphi na iimpazamo kwisicwangciso sabo sotyalo-mali zinokucaphukisa izicwangciso zabo zokwenza ulondolozo lwabo lube nenzuzo.
I-Endesa imalunga nokuzichaza
Elinye lamaxabiso avusa ulindelo lwangoku phakathi kwabatyali mali abancinci naphakathi ngokuchanekileyo yinkampani yombane i-Endesa. Elinye lamaxabiso avusa ulindelo lwangoku phakathi kwabatyali mali abancinci naphakathi ngokuchanekileyo yinkampani yombane i-Endesa